Kuki agbamakwụkwọ nke Mexico - Ezi Ntụziaka
esi esi nri sliced ​​poteto na imi ihe
ọdịiche dị n'etiti ihendori tomato na marinara ihendori
inine atịchoo itinye na hawaiian achịcha nnukwu efere
Kuki agbamakwụkwọ nke Mexico
Kuki agbamakwụkwọ nke Mexico (nke a na-akpọkarị “Achịcha Tea Russia” ma ọ bụ “Cookies Snowball”) dị nnọọ mfe ịme ma na-achọ njuaka nke ihe eji eme ya!
Kuki ndị a na-enwekarị ebe pụrụ iche na kuki kuki Krismas m, mana ha bara ezigbo uru n'oge ọ bụla n'afọ! Anyị na-efe ha oge ezumike ọ bụla n'akụkụ kpochapụwo Shortbread Kuki na Kuki Chocolate Chocolate na kuki niile na-ngwa ngwa-elo ngwa ngwa!
Ọ dịghị kuki kuki zuru oke n'enweghị nhọrọ nke Kuki Kuki Wedding nke Mexico!
best wor wonton ofe di m nso
Ntụziaka Cookies Wedding nke Mexico a bụ n'ezie ihe ndabere maka chọkọletị m hụrụ n'anya nke ọma kuki kuki uzommeputa, na mgbe m na-na-kwetara chocoholic, a chocolate-free version is every bit as good! Ihe ndi ahu bu ihe ndi di nfe ma obu eleghị anya i nweburu aka, usoro a dikwa mfe, ya mere ka anyi bido!
Kedu Ka I Si Eme Kuki Agbamakwụkwọ nke Mexico?
Otu ihe kacha amasị m gbasara kuki ndị a bụ na ha dị mfe ịme na ha na-eji ihe ole na ole eme ihe (enweghi akwa a choro maka nhazi nke taa!). Iji mee kuki agbamakwụkwọ nke Mexico:
Ude ọnụ bọta, sugar ntụ ntụ, wepụ vanilla, na nnu
Ghichaa na ntụ ọka
Ebido na finely chopped akụ
Nyefee mgwakota agwa n'ime bọọlụ na akpọọ nkụ
Nyefee na powdered sugar na-enwe!
Mkpụrụ Dị A Shouldaa Ka M Kwesịrị Iji Maka Cookie Wedding Mexico?
Ndị dị iche iche na usoro nri dị iche iche ga-enye gị azịza dị iche iche maka ajụjụ a! Pecans, walnuts, na almọnd bụcha ihe niile na-ewu ewu na nhọrọ dị mma maka Kuki Cookie Wedding Mexico. My onye mmasị bụ maka pecan snowball kuki, ma ebe ọ bụ na m gwụchara ihe niile m ọkọnọ eme a ọkara iri na abuo achịcha pecan , Ejiri m walnuts maka uzommeputa taa.
Maka uzommeputa a, ana m atụ aro ịlele 1 iko mkpụrụ osisi kachasị amasị gị, jiri nwayọọ ghaa ha na oven, jirizie nri ghee ha na nhazi nri tupu ị rụọ ọrụ ha na mgwakota agwa gị. Eluigwe!
chocolate peanut butter fudge condensed mmiri ara ehi
More Kuki Nutty You Ga-ahụ n'anya!
Cookies Hazelnut Thumbprint Kuki - ezinụlọ fave!
Kuki Akara Aka Ya - ọdịnala!
Kuki Watergate - n'anya nke a Ezi ntụziaka
Achịcha ahụekere ahụekere ọka bakee (ọ bụghị ịme achịcha) - eyen mma!
Kuki Cook na Nnukwu - ọgwụgwọ pụrụ iche!
Nwere Ike zekpokọta Kuki Agbamakwụkwọ Mexico?
Ee! Kuki ndị na-eme agbamakwụkwọ na Mexico na-agbazi nke ọma. Nwere nhọrọ abụọ mgbe ị na-agba kuki ndị a:
Kwadebe kuki kuki, tụgharịa n'ime bọọlụ, ma kpoo. Chekwaa mgwakota agwa kuki na akpa ikuku (Achọrọ m iji bọọlụ ọ bụla jiri ihe mkpuchi jidere ma tinye ya na akpa Ziploc ma ọ bụ tinye ha na nnukwu akpa Tupperware, jiri akwụkwọ wax mee ka mgwakota agwa ahụ ghara imechi ọnụ). Nwere ike ịme kuki ndị a kpọmkwem site na oyi kpọnwụrụ, mana buru n'uche na ha nwere ike iwe ogologo oge ime karịa usoro esi egosi.
Kuki kuki agbamakwụkwọ ndị Mexico, tụgharịa nke ọma na ntụ ntụ, ma kwe ka ajụkwa kpam kpam. Ozugbo emechara kuki, tinye ya n'ime akpa ikuku (ọzọ, m na-eji nnukwu Tupperware, na-ekewa oyi akwa na akwụkwọ wax), ma na-akpụkọta. Nwere ike ifriizi esi kuki ruo ọtụtụ ọnwa n'ụzọ dị otú a.
kedu eke mgbali tọhapụ ozugbo ite
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge nriiri na otu Nkeji Oge zuru ezu26 Nkeji Ọrụ35 kuki Onye edemedeSamantha Otu esi eme kuki agbamakwụkwọ nke Mexico! Kuki Wedding Mexico (nke a na-akpọkarị 'Achịcha Tea Russia' ma ọ bụ 'Snowballs') dị mfe ịme ma na-achọ njuaka ole na ole! Bipute Ntụtụ
▢1 iko unsired butter dị nro
▢1 iko ntụ ntụ
▢abụọ teaspoons wepụ vanilla
▢abụọ iko ntụ ọka niile ntụ ọka nkịtị
▢1 iko akụ, bibiri nke ọma (tụọ tupu igbutu) pecans, walnuts, ma ọ bụ almọnd ga-arụ ọrụ nke ọma na uzommeputa a, biko lee ndetu ederede maka ntuziaka na toasting nhọrọ na ịbe mkpụrụ gị *
▢Ọzọ ntụ ntụ maka ịgbagharị (ihe dị ka iko 1))
Kpochapu oven na 375 Celsius F ma debe mpempe kuki na akwụkwọ akpụkpọ anụ **.
Ikpokọta bọta, shuga ntụ ntụ, wepụ vanilla na nnu n'ime nnukwu efere nke ihe nkwụnye ihe nkwụnye (ma ọ bụ ịnwere ike iji nnukwu nnukwu efere na igwe ọkụ eletrik) tie aka ruo mgbe ọ na-eme ude.
Nke nta nke nta, ya na igwekota na obere ọsọ, tinye ntụ ọka ruo mgbe agwakọtara ihe dị iche iche (hụ na ị ga-ehichapụ akụkụ ya na ala nke efere ahụ!).
Gbakwunye mkpụrụ osisi a na-egbutu ma jiri spatula rụọ ọrụ mkpụrụ n'ime mgwakota agwa.
Scoop kuki mgwakota agwa site na mkpokọta 1 tablespoon ma tụgharịa n'etiti aka gị iji mepụta bọọlụ dị mma. Tinye na mpempe akwụkwọ a kwadebere, kuki kuki 1 'iche.
Ime na 375 Celsius F maka 10-12 nkeji ma ọ bụ ruo mgbe ala nke kuki na-amalite amalite ịgbanye aja aja aja.
Wepu si oven ma mee ka obi jụrụ ruo minit 10 tupu ị na-agagharị n'ụba site na mgbakwunye ntụ ntụ ọzọ. Kporie!
* Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmịchaa mkpụrụ gị tupu i jiri ya (maka ekpomeekpo kacha mma), gbanye ha ka ha ka dị tupu na-egbutu ha. Gbasaa mkpụrụ na ọbụna oyi akwa na mpempe kuki na akpọọ nkụ na 350 Celsius F maka minit 3-5 (ị ga-enwe ike ịnụ ísì ha mgbe ha gwụchara). Hapụ ha ka ha jụọ oyi tupu ha egbutu. Iri gị mkpụrụ , ị nwere ike iji mma ma ọ bụ ị nwere ike belata ha ngwa ngwa site na itinye na nhazi ihe nri na ịpịgharị ruo mgbe a ga-egbutu ha. ** Ọ bụrụ n’inweghị akwụkwọ akpụkpọ anụ , ị nwere ike iji akwụkwọ kuki a na-edeghị ede mgbe niile, naanị m na-ahọrọ akpụkpọ anụ ahụ n'ihi na ọ na-eme ka nhicha dị mfe!
Na-eje ozi:1kuki,Calorisị:Ogbe 108,Carbohydrates:9g,Protein:1g,Abụba:7g,Abụba Ajuju:3g,Cholesterol:13mg,Sodium:3. 4mg,Potassium:iri abụọ na otumg,Sugar:3g,Vitamin A:165IU,Calcium:5mg,Iron:0.4mg
Isiokwukuki dị mfe, kuki na-enweghị àkwá, kuki agbamakwụkwọ nke Mexico, achịcha tii russian, kuki snowball, kuki agbamakwụkwọ N'ezieKuki, eji megharịa ọnụ Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .